PEACEFUL PA: August 2015
သွေးပေါင်ကျတယ် ဆိုတာ (၁) - Low Blood Pressure (1)
သွေးပေါင်ကျတယ်ဆိုတာ - What is low blood pressure?
သွေးပေါင်ကျ (hypotension) တာကို လူတွေ စိုးရိမ်တတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး။
တချို့က သာမန်ထက် သွေးပေါင်ကျနေတတ်တယ်။ ဒါကတကယ်တော့ သတင်းကောင်းပဲ။ သွေးပေါင်ကျရင်
လေဖြတ်နိုင်ချေ၊ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သွေးပေါင်ကျတာက တခါတရံ ဒုက္ခပေးတဲ့အတွက် ဆရာဝန် (သို့) သူနာပြုဆရာမကို ပြသသင့်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ဆိုရင် သွေးပေါင်ချိန်ကျသလဲ? What isalow blood pressure reading?
90/60 mmHg နဲ့ သူထက်နဲနေရင် သွေးပေါင်ကျပါတယ်။
- အပေါ်က ၉၀ ရှိရင်၊ အောက်က ဘယ်လောက်ရှိရှိ
- အောက်က ၆၀ ထက် နဲနေရင်၊ အပေါ် ဘယ်လောက်ရှိရှိ
ဘာကြောင့် သွေးပေါင်ကျသလဲ? What causes low blood pressure?
တချို့က နဂိုကတည်းက သွေးပေါင်ချိန် နဲကြတယ်။ ဘာကြောင့်လို မပြောနိုင်ပါဘူး။
တချို့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေနဲ့ သောက်တဲ့ဆေးတွေကြောင့် သွေးပေါင်ကျနိုင်ပါတယ်။
စိုးရိမ်ရသလား? Is low blood pressure dangerous?
အများအားဖြင့်တော့ စိုးရိမ်စရာ မလိုပါဘူး။ တခါတရံတော့ မူးတာ၊ သတိလစ်တာအထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ပုံမှန်ထက် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး သွေးပေါင်ချိန် ရုတ်တရက် ထိုးကျသွားရင် အကြောင်းရင်း တခုခုကြောင့် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆရာဝန် (သို့) သူနာပြုဆရာမကို ပြသသင့်ပါတယ်။
ဘယ်လိုကုမလဲ? How is low blood pressure treated?
သွေးပေါင်ကျတဲ့သူအများစုကတော့ ကုဖို့ မလိုပါဘူး။
ဆရာဝန် (သို့) သူနာပြုဆရာမက ကုဖို့လိုတယ်လို့ ယူဆရင်တော့ သွေးကျရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ရှာပါလိမ့်မယ်။ ရှာတွေ့တဲ့အခါ ဘယ်လိုကုမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
http://www.bloodpressureuk.org မှ ပြန်ဆိုပါတယ်။
Posted by Papa at 12:04 AM
မိုးသောက်ယံနဲ့ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 32
ဒံယေလ ၉း ၂၅ - ၂၇။ ရောမ ၅း ၈ - ၁၂၊ ၁၉ - ၂၁။
“The Messiah shall be cut off, but not for himself.” – Dan. 9: 26.
“ထိုသခင်မှတပါး အဘယ်သူမျှ ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို မတတ်နိုင်။ ထိုသခင်၏ နာမတော်မှတပါး ငါတို့ကို ကယ်တင်နိုင်သော နာမတစုံတခုမျှ ကောင်းကင်အောက်လူတို့တွင် မပေါ်မရှိ။” (တမန် ၄း ၁၁ -၁၂) ထိုသခင်၏ နာမတော်သည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်း။
ထိုသခင်မှာ ဗီဇအပြစ် မရှိဘူး။ ညစ်စွန်းတဲ့ ဒုစရိုက်ကိုလည်း မပြု။ ကိုယ်တော်မှာ အပြစ် လုံးဝမရှိ။ ဒါကြောင့် သေခြင်းတရားက ကိုယ်တော်ကို အစိုးမရနိုင်ဘူး။ ကိုယ်တော့်အသက်ကို ဘယ်သူမှ တရားသဖြင့် ယူမရနိုင်သလို၊ အဓမ္မ အနိုင်အထက်ပြုပြီး မသတ်နိုင်ဘူး။ ကောင်းသောသိုးထိန်းက . . . “ကိုယ်အလိုအလျောက် ငါစွန့်၏။” လို့ မိန့်တော်မူတယ်။ “ကိုယ်အသက်ကို စွန့်ခြင်းမေတ္တာထက် သာ၍ ကြီးမြတ်သောမေတ္တာသည် (ခရစ်တော်မှတပါး) အဘယ်သူ၌ မျှမရှိ။” (ယော ၁၅း ၁၃)
ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်စေဖို့၊ သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့တယ်။ (၁ယော၎း ၁၀) အဲဒီမှာ တခါတည်းနဲ့ အပြီး အပြစ်ဖြေပေးခြင်း (atonement) ဆိုတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ မေတ္တာတော်ကို မြင်တွေ့ရတယ်။ အပြစ်ပြုသူက - လူ၊ ဝေဒနာခံစားရသူက - ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရား။ တရားတော်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ လွန်ကျူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝမ်းသာစရာအကြောင်းကို ခရစ်တော်၌ တွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အပြစ်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် မျက်ရည် စီးကြောင်းတွေက မတိုက်စားနိုင်ဘူး။ တောင်ပုံရာပုံ အလှူငွေတွေကလည်း မကွယ်ကာနိုင်ဘူး။ သခင်ယေရှုရဲ့ အသွေးတော်မှတပါး ဘယ်အရာကမှ ဖြေလွှတ်မပေးနိုင်ဘူး။
ကာရာနီမှာ အပြစ်တွေကို တခါတည်း သယ်ဆောင်သွားရလို့၊ အမျက်တော် သက်ရောက်ကာ ချက်ချင်း စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရတယ်။ လူအတွက် ဘုရားက တခါတည်း အပြီးအပိုင် အသေခံပေးတယ်။ လူစားထိုးပေးတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဉာဏ်တော်ကို အံ့ဘွယ် တွေ့မြင်ရတယ်။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာ ကုသိုလ်ရအောင်လုပ်တဲ့ လူ့နည်းလမ်းတွေ မလိုတော့ဘူး။ ကိုယ်ကိုကိုယ် အပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့၊ စိတ်နောင်ကြဉ်အောင် ဆုံးမဖို့၊ ဘုရားဖူးသွားဖို့တို့ မလိုတော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အပြစ်ကြွေးရှိသမျှကို ဘုရားသခင်ရဲ့ သိုးသငယ်က အကြေအလည် ပေးဆပ်ပြီးပါပြီ။ ကားတိုင်ထက်မှာ ကိုယ်တော် ပြောခဲ့တဲ့စကားက . . . . အ - မှု - ပြီး - ပြီ ။
ချစ်သောစာရှုသူ၊ သင့်ကိုယ်စား အသွေးသွန်းလောင်းခဲ့တဲ့ ကယ်တင်ရှင်ကို မြင်ပြီလား။ သင့်အပြစ် တခုစီတိုင်းကို သင့်ကိုယ်စား သယ်ဆောင်သွားတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ သားတော်ရင်းကို မြော်ကြည့်ပါ။ တခြားတယောက်ကို မဟုတ်ဘူး။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကို မဟုတ်ဘူး။ သင်းအုပ်ဆရာကို မဟုတ်ဘူး။ မာရိကိုလည်း မဟုတ်ဘူး။ ရုပ်ထု လှလှကလေးတွေ ကိုလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တော်ကိုသာ မြော်ကြည့်ပါ။ သခင်ယေရှုကိုသာ မြှော်ကြည့်ပါ။ သင့်အတွက် ဘယ်သူမှ အသေမခံခဲ့ဘူး။ ကိုယ်တော်သာ သင့်အတွက် အသေခံခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကယ်တင်ရှင်နဲ့ ကြီးမြတ်တဲ့ ဘုရားသခင် ယေရှုခရစ်သာ အသေခံခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်၏ခေါ်ဖိတ်သံ . . .
“မြေကြီးစွန်းသားအပေါင်းတို့၊ ငါ့ကို မြှော်ကြည့်၍၊ ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကို ခံကြလော့။ ငါသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်၏။ ငါမှတပါး အခြားသောဘုရားမရှိ။” (ဟေရှာယ ၄၅း ၂၂)။
Posted by Papa at 12:08 AM
Labels: Charles Spurgeon, Devotion
မိုးသောက်ယံနဲ့ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 31
. . . ငါ့ကို မစတော်မူသည်ဖြစ်၍. . .
ဟေရှာ ၄၁း ၁ - ၁၄။ ဟေဗြဲ ၁၃း ၁ - ၈။
“I will help thee, saith the Lord.” – Isa. 41: 14.
စိတ်ချမှုဖြစ်စေမယ့် ကျေးဇူးတော်နဲ့ ကြွယ်ဝတဲ့ စကားတော်တွေ ထာဝရဘုရားထံမှာ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ငါ မ, စမယ် လို့ မိန့်တော်မူတယ်။ ဘယ်လို ပြဿနာတွေ ကြုံနေရသလဲ။ ထာဝရဘုရား မတတ်နိုင်တဲ့အရာ ရှိသလား။ ဘုရားသခင် ပြုတော်မူသမျှကို ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်. . . မိန့်တော်မူသံကို ဒီလို ကြားရလိမ့်မယ်။ “ငါဟာ သင်တို့ကို ငါ့အသွေးနဲ့ ဝယ်ပြီးတော့၊ သင်တို့အတွက် ဘာကြောင့် ငါ အသေခံခဲ့သလဲ။ ကြီးတဲ့အမှုကို ငါပြုခဲ့တာ မှန်ရင်၊ ငယ်တဲ့အမှုကို မပြုဘဲနေမလား။” ရှင်ပေါလုက- “မိမိသားတော်ရင်းကို မနှမြောဘဲ၊ ငါတို့ရှိသမျှ အဘို့အလို့ငှါ စွန့်တော်မူသောသူသည် သားတော်နှင့်တကွ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ငါတို့အားမပေးဘဲ အဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်း။” (ရောမ ၈း ၃၂) မ,မစဘဲ ကိုယ်တော်မနေပါ။
မစတော်မူခြင်းဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းကြီးမားတဲ့ စိတ်နှလုံးတော်မှ လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ဤကမ္ဘာမတည်မရှိမှီတည်းက ရွေးကောက်တော်မူတယ်။ ပဋ္ဋိညာဉ်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ကို ထည့်သွင်းခဲ့တယ်။ သားတော်မြတ်ကလည်း ဘုန်းအသရေကို စွန့်ပြီး၊ ကျွန်တော်တို့အတွက် လူဇာတိကို ခံယူတယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွက် ကာရာနီမှာ အသက်စွန့်တယ်။ ဒါဆိုရင်၊ အခုပဲ ကျွန်တော်တို့ကို ကိုယ်တော် မ,စတော်မူလိမ့်မယ်။ ကိစ္စတခုတည်း အတွက်ပင် အကြိမ် အထောင်အသောင်းလောက် မ,စဖို့ လိုနေရင်လည်း ကိုယ်တော်မငြင်းဘူး။ လိုတဲ့အရာဟာ ကိုယ်တော် ပေးမယ့်အရာနဲ့ နှိုင်းရင် ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တော် မတတ်နိုင်တဲ့အရာ မရှိဘူး။ ယုံကြည်ခြင်း အားနည်းတဲ့သူ၊ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ သံသယဖြစ်လာတိုင်း၊ “သင့်ကို ငါ မ, စမည်” ဆိုတဲ့ ဂတိတော်ကို သတိရ အောက်မေ့ပါ။ ဂတိတော်ဟာ ဘယ်အခါမှ အချည်းနှီး ဖြစ်မသွားဘူး။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့- မ,စ ကူမတဲ့ သခင်အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြစို့။ “သင့်ကိုပြုစုစေခြင်းငှါ၊ ဘုန်းအာနုဘော်တော် နှင့် ပြည့်စုံလျှက်၊ မိုဃ်းကောင်းကင်ကို စီးတော်မူသော ယေရှုရုန်အမျိုး၏ ဘုရားသခင်နှင့် တူသောသူမရှိ။ ရှေးဦးစွာသော ဘုရားသခင်သည် သင်ခိုလုံရာဖြစ်၍၊ နိစ္စထာဝရလက်ရုံးတော်ဖြင့် သင့်ကို ထောက်မတော်မူ၏။” (တရားဟော ၃၃း ၂၆ - ၂၇) ကဲ - လုံလောက်ပြီလား။ ကောင်းကင်တကာတို့ရဲ့ အထွဋ္ဋ်မှာ စိုးစံနေတဲ့ ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ အနတ္တတန်ခိုးတော်ထက် ပိုကြီးတဲ့ ခွန်အားကို လိုချင်နေသေးသလား။ “ထာဝရဘုရားသည် အစဉ်အမြဲ တည်တော်မူသော ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်း၊ မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ဖန်ဆင်းတော်မူသော အရှင် ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်း၊ မောတော်မူခြင်း၊ ပင်ပန်းတော်မူခြင်းမရှိ။ စစ်၍မကုန်နိုင်သောဉာဏ်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူကြောင်း ကို၎င်း၊ သင်သည် မသိမကြားဘူးသလော။” (ဟေရှာ ၄၀း ၂၈) အဲဒီ ဘုရားသခင်က “သင့်ကိုငါမစမည်” လို့ မိန့်တော်မူတာကြောင့် ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ “ထာဝရဘုရားသည် ငါ့ကိုမစတော်မူသည်။” လို့ တုန့်ပြန်ကြပါစို့။
မေးခွန်း။ ။ထာဝရဘုရား မတတ်နိုင်သောအမှု တစုံတခုရှိသလော။ (ကမ္ဘာ ၁၈း ၁၄)
Posted by Papa at 11:45 PM
မိုးသောက်ယံနဲ့ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 30
ဆာလံ ၁၀၉း ၁ - ၄။ ၂၁ - ၃၁။ မဿဲ ၇း ၇ - ၁၁။
“But I give myself unto prayer.” – Psalms. 109: 4.
လိမ်ညာတဲ့ လျှာတွေက ဒါဝိဒ်ကို သိက္ခာချဖို့ အလုပ်ရှုပ်နေကြပေမယ့်၊ ဒါဝိဒ်က ကိုယ်ကိုကိုယ် မကာကွယ်ဘူး။ ပိုမြင့်တဲ့ အထက်ရုံးတော်ကိုပဲ အမှုတွဲတင်တယ်။ ဘုရင်မင်းမြတ်ထံ အသနားခံတယ်။ ရန်သူရဲ့ အမုန်စကားကို အကောင်းဆုံး တုန့်ပြန်နည်းက ဆုတောင်းခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဆာလံဆရာဒါဝိဒ်က စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ ဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ၊ ခွန်အားရှိသမျှနဲ့ ဆုတောင်းတယ်။ ဧသောထံ ပြန်လာတဲ့ ယာကုပ်လိုပဲ ဆုတောင်းခြင်းမှာ လုံးထွေးနေခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့လည်း ကျေးဇူးတော် ပလ္လင်ရင်းမှာ ဆုတောင်းနေသင့်ပါတယ်။
သတိပြုဖို့က - ဆုတောင်းချက် အများစုက အကျိုး မရကြဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ။ ကိုယ့်အတွက် မပါလို့ပါ။ အရိပ်ဆိုတာ ဝတ္ထုစစ်မဟုတ်လို့၊ အစွမ်းမရှိဘူး။ ကိုယ့်အတွက်မပါပဲ ဆုတောင်းရင် ဘာအကျိုးမှ မရှိဘူး။ ဆုတောင်းတာတွေကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်ကြစို့။ ဆုတောင်းတဲ့အခါ စိတ်နှလုံးကြေကွဲစွာ၊ စိတ်ထက်သန်စွာ၊ ဆန္ဒပြင်းပြစွာ၊ မေတ္တာစိတ်ထားနဲ့၊ သခင်ဘုရားထံမှာ တောင်းလေ့ရှိသလား။
ကောင်းကင်တံခါးတွေကို မီးစွဲစေမယ့် အမြောက်လို ပြင်းပြတဲ့ ဆုတောင်းခြင်းဟာ ကောင်းကင်တံခါးတွေကို အမြန်ပွင့်စေလိမ့်မယ်။ ဆုတောင်းတဲ့အခါ မကြာခဏ စိတ်ပျံ့လွင့်တတ်တယ်။ အတွေးလွန်တတ်သလို၊ အဓိက အချက်ကိုလည်း စိတ်မစွဲလန်းတတ်ဘူး။ စိတ်နှလုံးက ပြဒါးလို စီးဆင်း လှည့်ပတ်နေတတ်တယ်။ ကောင်းကင်တံခါးကို ချိန်ရွယ်မယ့် အမြောက်လို ညီညွတ်မှုတန်ခိုးလည်း မရှိဘူး။ ရည်ရွယ်ချက် ပျောက်နေတတ်တယ်။ အကျိုးမခံစားရဘူးဆိုရင် ဆုတောင်းတာ အလကားပေါ့။ ဘုရားသခင်ကိုလည်း စိတ်နာစေတယ်။
ဆုတောင်း ပဌာနာပြုလျှက်နေခြင်း ဆိုတာက အဆက်မပြတ် စွဲစွဲမြဲမြဲ ဆုတောင်းခြင်းကို ဆိုလိုတယ်။ ဒါဝိဒ် ဆုတောင်းရင် တခါတည်း အော်ပြီး၊ လက်လျှော့သွားတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ကောင်းကြီး မရမချင်း အော်ဟစ် တောင်းဆို နေတယ်။ တာဝန်အရ ထုံးစံသဘောမျိုး မတောင်းသင့်ဘူး။ စိတ်အားကြီးစွာ နေ့တိုင်း လေးလေးနက်နက် တောင်းရမယ်။ ပလ္လင်တော်ရဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့အရပ်ကို စိတ်စွဲလန်းပြီး၊ အားမလျှော့ဘဲ ဆုတောင်းကြပါစို့။ ဆုတောင်းတတ်အောင် သွန်သင်ပေးတော်မူပါ။ အို ထာဝရဘုရား။
ဆင်ခြင်ရန်။ ။ အာရုံမစိုက်ဘဲ ဆုတောင်းတာဟာ လက်ထဲမှာ အရုပ်တရုပ်ကိုင်ကာ ကစားနေတဲ့ ရှင်ဘုရင်ရှေ့မှာ အသနားခံနေတာနဲ့ တူပါတယ်။
Posted by Papa at 3:00 AM
မိုးသောက်ယံနဲ့ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 29
ဂတိတော်အတိုင်း …. ပြုတော်မူပါ။
၂ရာ ၇း ၁၈ -၂၉။ ၂ကော ၁း ၂၀ - ၂၂။
"Do as thou hast said."2Sam 7: 25.
ဘုရားဂတိတော်မှန်သမျှဟာ စက္ကူစုတ်လို လွင့်ပစ်လိုက်ရတယ်လို့ မရှိဘူး။ သုံးစေချင်လို့ ပေးထားတာပါ။ ဘုရားရဲ့ရွှေဆိုတာ ကပ်စေးနဲ့တဲ့လူရဲ့ အိပ်ကပ်ထဲက ပိုက်ဆံလို မဟုတ်ဘူး။ လူတွေသုံးဖို့ သွန်းလောင်းတဲ့ ဒင်္ဂါးပြားပါ၊ ဂတိတော်ပေးဟာ ကောင်းကြီးခံစားရဖို့ပါ။ ဂတိတော်တွေကို ထောက်ပြပြောလာတာလောက် ဘုရားသခင် နှစ်သက်တဲ့ တခြားအရာ မရှိတော့ပါဘူး။ သားသမီးတွေက “အို၊ ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ပြုတော်မူပါ။” လို့ ပြောတာကို ဘုရားသခင် ကြားချင်တယ်။ ဂတိတော်ကို တောင်းခံတာဟာ ဘုရားဘုန်းတော် ထင်ရှားစေတာ ဖြစ်တယ်။
ဂတိတော်အတိုင်း ကောင်းကြီး မပေးနိုင်အောင် ဘုရားသခင် ဆင်းရဲတယ်လို့ ထင်နေသလား။ ဒါမှမဟုတ် သန့်ရှင်းခြင်းတွေ သက်ရောက်လာဖို့ ဘုရားသခင်မှာ သန့်ရှင်းခြင်း နဲနေတယ်လို့ ထင်သလား။ ဒါမှမဟုတ် သင့်အပြစ်များ ဆေးကြောဖို့ စင်ကြယ်ခြင်း နဲနေတယ်လို့ ထင်နေသလား။ ဒီလို မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မိန့်တော်မူတာက . . . “လာကြ၊ တရားစီရင်ကြကုန်အံ့။ သင်တို့အပြစ်သည် နီသောအဆင်းရှိသော်လည်း၊ မိုဃ်းပွင့်ကဲ့သို့ ဖြူလိမ့်မည်။” (ဟေရှာ ၁း ၁၈) နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကိုင်စွဲပါ။ ကိုယ်တော်ဟာ သစ္စာနဲ့ ပြည့်စုံတယ်။ ဟုတ်မှန်တော်မူတယ်။
ခွင့်လွှတ်ခြင်းဂတိတော်ကို ယုံကြည်စွာ ကိုင်စွဲပါ။ ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်ရင်းကို တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပြီး၊ “ကိုယ်တော့် ဂတိတော်ရှိပါတယ်။ ဂတိတော်အတိုင်း ပြုတော်မူပါ။” လို့ ဆုတောင်းရင်၊ ဘုရားသခင် နှစ်သက်ပါတယ်။ ဂတိတော်တွေကို ပစ်ပယ်ရင် (သို့) သံသယဖြစ်ရင် ဘုရားကို ကဲ့ရဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်ရင်းကို အမြန် ချဉ်းကပ်ပြီးတော့ . . . “အို၊ ထာဝရဘုရား၊ အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်၏ ဂတိတော်ကို ခံထိုက်သောသူ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ကိုယ်တော်သည် ထိုသို့မိန့်တော်မူပါပြီ။” လို့ ဆုတောင်းရင် လိုတာတွေကို ပေးသနားပါလိမ့်မယ်။
ဘုရားသခင်ဟာ ဘဏ်သူဌေးတဦးလိုပါပဲ။ ဘဏ်ချက်လက်မှတ်တွေ လက်ခံရတာ၊ ထုတ်ပေးရတာ ပျော်တယ်။ ချက်လက်မှတ်နဲ့ ငွေထုတ်သလို၊ ကိုယ်တော်ထံမှ ဆုထုတ်ယူကြစို့။
ဂတိတော်က မှိုမတက်ဘူး။ သံချေး မတက်ဘူး။ ဂတိတော်ကို ဆွဲထုတ်။ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တောင်း။ ဒါက ဘုရားသခင်အတွက် ပြသနာ မဟုတ်ဘူး။ တောင်းလိုက်စမ်းပါ။ ပေးချင်နေတာ။ တောင်းတာထက်ကို ပေးချင်နေတာ။
နေက အလင်းပေးရလို့ ပင်ပန်းမသွားဘူး။ စမ်းချောင်းကလည်း စီးဆင်းရလို့ မမောဘူး။ ဒီလိုပဲ၊ ဘုရားသခင်ကလည်း ဂတိအတိုင်း ပေးသနားရလို့ မမောပန်းပါဘူး။ ကဲ- ပလ္လင်တော်နားချဉ်းကပ်ပြီး "ဂတိတော်အတိုင်း ပေးသနားတော်မူပါ" လို့ ဆုတောင်းလိုက်စမ်းပါ။
မိုးသောက်ယံနဲ့ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 28
ထာဝရဘုရားထံသို့ . . . အော်ဟစ်သောအခါ . .
ဆာလံ ၃။ မဿဲ ၁၄း ၂၂ - ၃၃။
"Beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me." - Matt 14: 30.
“နစ်မြုပ်ချိန်ဟာ ဆုတောင်းချိန် ဖြစ်တယ်။”
သခင်ဘုရားရဲ့ ကျွန်တွေအတွက် နစ်မြုပ်ချိန်ဟာဆုတောင်းချိန်ပါပဲ။ ပေတရုဟာ အန္တရာယ်ခရီးကို လှေစီးထွက်ခဲ့တယ်။ ဆုမတောင်းဘူး။ နစ်မြုပ်စပြုတော့ အန္တရာယ်က သူ့ကို ဘုရားထံ ဆုတောင်းလာစေတယ်။ စိတ်နဲ့ကိုယ်မှာ ဝေဒနာကြုံရင် အလိုလို ဆုတောင်းချင်လာတယ်။ အစာရှာတဲ့ မြေခွေးက ဘေးလွတ်ရာ တွင်းထဲ ပြေးဝင်တတ်သလို၊ ငှက်ကလေးတွေက တောအုပ်ထဲကို ပျံသန်းသွားတတ်တယ်။ ဒီလိုပဲ၊ ယုံကြည်သူလည်း စုံစမ်းခြင်းခံရတဲ့အခါ ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ ကွယ်ကာရာဌာနဖြစ်တဲ့ ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်ရင်းကို တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ရတယ်။
ပေတရု ဆုတောင်းရာမှာ စကားလုံး (၃) လုံးပဲ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိစ္စအတွက် လုံလောက်ပါတယ်။ ထိရောက်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က ရှည်ရှည် မတောင်းနဲ့။ ခွန်အားပါဖို့ပဲ လိုတယ်။ လိုချင်တာကိုပဲ စိတ်စွဲလန်းတာဟာ ဆု တိုတိုတောင်းတတ်ဖို့ သင်ပေးတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်။ ဆုတောင်းရာမှာ မာနမပါတဲ့၊အသင့်လျော်အကောင်းမြတ်ဆုံး စကားတွေသာ ဖြစ်ရမယ်။ ဆုတောင်းရင် စကားထပ်နေတာဟာ အလကားပဲ။ ဖွဲနဲ့ တူတယ်။ အဖိုးတန်အရာမှန်သမျှဟာ သေးငယ်တတ်တယ်။ ရှည်လျားတဲ့ ဆုတောင်းတွေကို ပေတရုတောင်းသလို (၃) - ခွန်း လောက်နဲ့ တောင်းလို့ရတယ်။ သာသနာပလူတွေလို အချည်းနှီးသောစကားနဲ့ အထပ်ထပ်တောင်းတာကို ရှောင်ပါ။ စကားများပေမယ့် ဘာမှ မရဘူး။ (မဿဲ ၆း ၇) လူမှာ အခက်ကြုံချိန်ဟာ ဘုရားသခင်အတွက် အခွင့်သာချိန် ဖြစ်တယ်။
ကယ်ဖို့ ဆုတောင်းသံကို သခင်ယေရှုက နားတော်နဲ့ ချက်ချင်းကြားတယ်။ နားတော်နဲ့ စိတ်နှလုံးတော်က တွဲဖက် ညီတယ်။ လက်တော်က မနှေးဘူး။ “ထာဝရဘုရားသည် ပဌာနာပြုသောသူအပေါင်း၊ သစ္စာနှင့်တကွ ပဌာနာပြုသောသူ အပေါင်းတို့၏ အနီးအပါး၌ရှိတော်မူ၏။” (ဆာလံ ၁၄၅း ၁၈ -၁၉) ဒုက္ခမြစ်ရေတွေကြားမှာ နစ်မြုပ်လုနီးပါး ဖြစ်နေသလား။ ရုန်းကန်နေရတဲ့ အသက်တာ မုန်တိုင်းတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေသလား။ လောကဒဏ်ကို အလူးအလဲ ခံစားနေရသလား။ ပြင်းထန်တဲ့ လှိုင်းနဲ့ လေတွေထံကနေ မျက်စိလွှဲပြီး၊ ဘုရားသခင်ကိုသာစေ့စေ့မြှော်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်တော်သင့်အနီးနားမှာပဲ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်တော် အနီးမှာ ရှိနေရင်ဘာမှမဆုံးရှုံးတော့ဘူး။ ကိုယ်တော်ကို အော်ဟစ်ရင် အလျှင်အမြန် အဖြေပေးတယ်။ “ထာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ချမ်းသာရပါ၏။”
ဆုတောင်း။ ။အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ကြိုးစားဆုတောင်းဖို့ရာ မစတော်မူပါ။ ထာဝရဘုရား။
Posted by Papa at 3:57 AM
မိုးသောက်ယံနဲ့ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 27
ဟေရှာယ ၆၃း ၁။ ရောမ ၁း ၁၆ - ၃၂။
"Mighty to save." - Isa 63:1.
“ကယ်တင်ခြင်းငှါ” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း အမှုတော်ကြီး တခုလုံးကို ရှေ့မဆွသန့်ရှင်းတဲ့ အလိုတော်ကနေ၊ စုံလင်တဲ့သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်သည့်တိုင်အောင် နားလည်ခွင့်ရနိုင်ပါတယ်။ ခရစ်တော်ဘုရားဟာ နောင်တရသူကို ကယ်တင်ဖို့ တန်ခိုးကြီးရုံမျှမက၊နောင်တရလာအောင်လည်း တတ်နိုင်တယ်။ ယုံကြည်သူကို ကောင်းကင်သို့တိုင် ပို့ဆောင်ပေးတော်မူတယ်။ လူတွေကို နှလုံးသားအသစ် ပေးဖို့၊ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ သူတို့အထဲမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့၊ သန့်ရှင်းခြင်းကို မုန်းတဲ့သူတွေပင်လျှင် အဲဒီတရားကို ချစ်တတ်လာဖို့၊ ကျောခိုင်းစွန့်ခွာသူတွေကို ရှေ့တော်မှောက် ဒူးထောက် လာစေဖို့၊ ကိုယ်တော် တန်ခိုးကြီးတော်မူတယ်။
ဘုရားသခင်ပြုခဲ့သမျှတွေမှာ ဘုရားတန်ခိုးတော်ကို သိမြင်ခွင့် ရနိုင်တယ်။ ယုံကြည်သူရဲ့ အသက်တာသည်ပင်လျှင်၊ တန်ခိုးကြီးတဲ့ ဘုရားသခင် ပြုတော်မူတဲ့ အံ့ဩဘွယ် နမိတ်လက္ခဏာတွေပဲ ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်တော့်လူတွေကို သန့်ရှင်းစေဖို့၊ သန့်ရှင်းခြင်းကို စောင်မမြဲမြံစေဖို့ တန်ခိုးကြီးတော်မူတယ်။ ဒါထက်မက သူတို့ခံစားရတဲ့ ထာဝရကယ်တင်ခြင်းကို ကောင်းကင်မှာ ပြည့်စုံစေတဲ့တိုင်အောင် သူတို့ကို တည်ကြည်ခိုင်ခံ့စေလိမ့်မယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့ ကယ်တင်တဲ့ တန်ခိုးတော်ဟာ ယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားတာမျိုး၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် ဆက်လက်စောင့်ထိန်းဖို့ ပစ်ထားတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကောင်းတဲ့အမှုကို ပြုစ ပြုတော်မူတဲ့ကိုယ်တော်ဟာ အဆုံးတိုင်အောင်ပြီးစီးလျှက် ပြုတော်မူပါလိမ့်မယ်။ ( ဖိလိပ္ပိ ၁း ၆) ကယ်တင်ရှင်ဟာ ကယ်တင်ဖို့ရာတန်ခိုးကြီးပါတယ်။
သေနေတဲ့ ဝိညာဉ်ထဲကို အသက်သွင်းပေးမယ်၊ အဲဒီအသက်မြဲမြံအောင် မစတော်မူမယ်။ ပြုမိတဲ့ အပြစ်တွေကြားမှာပဲ အသက်ကို ခွန်အားနဲ့ ပြည့်နေစေမယ်။ ကျေးဇူးတော်နဲ့ သန့်ရှင်းခြင်းမှာ ဆက်လက် ကြီးပွားစေမယ်။ နောက်ဆုံး ဒီကမ္ဘာမှ ခွါပြီး၊ ဘုန်းတော်ဝင်စားချိန် စုံလင်သည်အထိ ပြုတော်မူသမျှကို ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ ဒီလိုပြုနိုင်ရုံမက ဒီထက်မကပြုတော်မူဖို့ ဘုရားသခင် တန်ခိုးကြီးပါတယ်။ တယောက်ယောက်အတွက် သင် ဆုတောင်းနေသလား။ စိတ်ပျက်မသွားနဲ့။ လက်မလျှော့နဲ့။ ထာဝရဘုရားက ကယ်တင်ဖို့ တန်ခိုးကြီးတယ်။ တန်ခိုးတော် လက်ရုံးအပေါ်မှာ ခိုလှုံကိုးစားပါ။ ပြဿနာတွေက နှောက်ယှက်နေသလား။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကိုယ်တော့်ကျေးဇူးဟာ သင့်အဖို့ လောက်ပါတယ်။ ကယ်တင်စပြုဖို့၊ ဆက်လက်ပြုစုဖို့၊ နောက်ဆုံးစုံလင်ခြင်းသို့ ရောက်ဖို့၊ ထာဝရဘုရားတန်ခိုးကြီးပါတယ်။ တန်ခိုးတော်ကြီးမားကြောင်း အကောင်းဆုံးသက်သေကတော့ သင့်ကို ကယ်တင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်မက လူအများကြီးကို ကယ်တင်ဖို့လည်း ကိုယ်တော်မှာ ကြီးမားတဲ့ တန်ခိုးတော်ရှိပါတယ်။
မေးခွန်း။ ။ ထာဝရဘုရား မတတ်နိုင်သောအရာရှိသလား။
ဆုတောင်း။ ။ အားလျော့စိတ်ပျက်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ကိုယ်တော်ကိုကိုးစားဖို့ ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေပါ အဘ။
Posted by Papa at 4:03 PM
မိုးသောက်ယံနဲ့ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charl...